OTU ESI EWEPU EGO SITE WEBMONEY - OKE EGO - 2019
Isi Oke ego
Wepụ ego site na WebMoney
Microsoft Excel nwere ike ịkwado ọrụ onye ọrụ na tebụl na okwu ọnụ ọgụgụ, rụọ ọrụ ya. Enwere ike ime nke a site na iji ngwa ngwa nke ngwa a, na ọrụ dị iche iche. Ka anyị leba anya na atụmatụ kachasị mma nke Microsoft Excel.
Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na Microsoft Excel bụ VLOOKUP. Na ọrụ a, ị nwere ike ịkwado ụkpụrụ nke otu tebụl ma ọ bụ ọtụtụ, dọrọ gaa na ọzọ. Na nke a, a na-achọ ọchụchọ naanị na kọlụm mbụ nke okpokoro. Ya mere, mgbe data gbanwere na tebụl iyi, data na-emepụta na-akpaghị aka na tebụl a napụtara, bụ nke a ga-arụ ọrụ ịmepụta iche. Dịka ọmụmaatụ, data sitere na tebụl nke ọnụahịa ọnụọgụahịa nke ahịa ahịa nwere ike iji gbakọọ ihe ngosi na tebụl, banyere oke nke ịzụta na usoro ego.
A malitere CDF site ntinye onye ọrụ "CDF" site na Ọkachamara Ọrụ na cell ebe data ga-egosipụta.
Na windo nke gosipụtara, mgbe ịmalitere ọrụ a, ịkwesịrị ịkọwa adreesị nke cell ma ọ bụ ọtụtụ sel nke sitere na ya ga-ewepụ data.
Ihe omumu: Iji WFD na Microsoft Excel
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke Excel bụ ịmepụta tebụl dị iche iche. Site na ọrụ a, ị nwere ike ịkekọrịta data site na tebụl ndị ọzọ dịka ọkwa dị iche iche, yana igosi nchịkọta dị iche iche na ha (nchịkọta, ọtụtụ, nkewa, wdg), ma mepụta nsonaazụ ya na tebụl dị iche. N'otu oge ahụ, enwere ohere dị ukwuu maka ịmepụta ogige okpokoro.
E nwere ike ịmepụta tebụl dị na "taabụ" taabụ site na ịpị "nke a na-akpọ" Pivot Table "bọtịnụ.
Ihe Ọmụmụ: Iji PivotTables na Microsoft Excel
Maka ngosipụta anya nke data etinye na tebụl, ịnwere ike iji chaatị. Enwere ike iji ha mee ihe ngosi, dee akwụkwọ nyocha, maka nyocha ebumnuche, wdg. Microsoft Excel na-enye ngwaọrụ dịgasị iche iche maka ịmepụta chaatị dị iche iche.
Iji mepụta eserese, ịkwesịrị ịhọrọ otu sel nke nwere data ịchọrọ igosipụta ihu. Mgbe ahụ, ịnọ na "taabụ" taabụ, họrọ na rịịbị ụdị ụdị eserese nke ịchọrọ na ọ kachasị mma iji mezuo ihe mgbaru ọsọ ahụ.
A na-edozi ebe ederede aha, gụnyere ntọala aha ya na axis, na tab "Na-arụ ọrụ na eserese".
Otu ụdị chaatị bụ eserese. Ụkpụrụ nke iwu ha bụ otu ihe ahụ dị na ụdị esemokwu ndị ọzọ.
Ihe ọmụmụ: Iji chaatị dị na Microsoft Excel
Na-eme ihe na EXCEL
Iji rụọ ọrụ na nchịkọta data na Microsoft Excel, ọ bara uru iji usoro pụrụ iche. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike ịme arụmọrụ dị iche iche na data dị na tebụl: mgbakwunye, ntinye ntụgharị, ịmepụta ọtụtụ, nkewa, na-ebuli ogo nke mgbọrọgwụ, wdg.
Iji tinye usoro ahụ, ịkwesịrị na cell ebe ị na-ezube igosipụta nsonaazụ, tinye akara "=" ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-akọwapụta usoro ahụ, nke nwere ike ịgụnye akara akara, nọmba, na adreesị cell. Iji wepụta adreesị nke cell nke sitere na ya weghaara data maka nchịkọta, pịa ya na òké ahụ, yana nhazi ya ga-apụta n'ime sel iji gosi nsapụta.
Ọzọkwa, Microsoft Excel nwere ike iji ya dị ka onye nyocha mgbe niile. Iji mee nke a, na nhazi usoro ma ọ bụ n'ime sel ọbụla tinye ntinye okwu mgbakọ na mwepụ mgbe "sign" = ".
Ihe Ọmụmụ: Ịme ihe ntinye na Microsoft Excel
Ọ BỤRỤ ọrụ
Otu n'ime ihe ndị a kachasị ewu ewu na Excel bụ ọrụ "IF". Site n'enyemaka ya, ị nwere ike ịtọba n'ime mkpụrụedemede mmepụta nke otu nsonaazụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ a na-ezute, na ntụgharị ọzọ, ọ bụrụ na enweghị mmezu ya.
Nkọwa nke arụ ọrụ a bụ "IFỊRỊ (okwu ezi uche; [ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu]; [ma ọ bụrụ na ụgha])".
Site n'enyemaka nke ndị ọrụ "AND", "MA" na ọrụ a na-arụ ọrụ "Ọ BỤRỤ", ị nwere ike ịtọ nkwenye na ọtụtụ ọnọdụ, ma ọ bụ otu n'ime ọnọdụ dị iche iche.
Ihe ọmụmụ: Iji ọrụ IF na Microsoft Excel
Iji macros na Excel Microsoft, ị nwere ike idekọ mmegbu ụfọdụ omume, wee kpọọ ha na akpaghị aka. Nke a dị mkpa na-ewepụta oge iji rụọ ọtụtụ ọrụ nke otu ụdị.
Enwere ike ịdekọ Macros site n'ịmegharị ndekọ nke omume ha na mmemme, site na bọtịnụ kwekọrọ na teepu ahụ.
Ọzọkwa, a pụrụ ide macros site na iji asụsụ Visual Basic markup n'asụsụ nchịkọta pụrụ iche.
Ihe omumu: Iji Macros na Microsoft Excel
Iji họrọ ụfọdụ data na tebụl, a na-eji ọrụ nhazi ọnọdụ. Site na ngwaọrụ a, ị nwere ike hazie usoro iwu nhọrọ. A pụrụ ime usoro nhazi nke onwe ya n'ụdị nke histogram, ụda agba, ma ọ bụ ihe oyiyi.
Iji gaa n'usoro nhazi ọnọdụ, ịkwesịrị ịhọrọ ọnụọgụ sel nke ị na-aga ịhazi, yana na Home taabụ. Ekem, ke toolbar Styles, pịa bọtịnụ, nke a na-akpọ Usoro Nhazi. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịhọrọ nhọrọ nhazi nke ịchọrọ na ọ kachasị mma.
A ga-emezi usoro.
Ihe Ọmụmụ: Na-etinye Nhazi Nkwado na Microsoft Excel
Ọ bụghị ndị ọrụ niile maara na okpokoro, nanị mmasị na pensụl, ma ọ bụ iji ókèala, Microsoft Excel ghọtara dị ka ebe dị mfe nke sel. Iji mee ka a ghọta data a dị ka tebụl, a ghaghị ịgbanwe ya.
A na-eme nke a nanị. Iji malite, họrọ nchịkọta achọrọ na data ahụ, mgbe ahụ, ịnọ na taabụ "Home", pịa bọtịnụ "Nhazi dika tebụl". Mgbe nke ahụ gasịrị, ndepụta na-egosi na nhọrọ dị iche iche maka imewe tebụl. Họrọ ihe kacha mma ha.
Ọzọkwa, a pụrụ ịme tebụl site na ịpị bọtịnụ "Ntọala," nke dị na "Wanye" taabụ, mgbe ị na-ahọpụta mpaghara ebe ederede data.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ahọrọ ụdị nhọrọ nke sel Microsoft Excel dị ka tebụl. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na i tinye ụfọdụ data n'ime sel dị na ala nke tebụl, a ga-etinye ha na tebụl a na-akpaghị aka. Na mgbakwunye, mgbe ị na-agbadaa, isiokwu nke tebụl ga-adị mgbe niile n'ime oghere.
Ihe ọmụmụ: Ịmepụta spreadsheet na Microsoft Excel
Site n'enyemaka nke nhọrọ nhọrọ oke, ị nwere ike ịchọta data sitere n'aka dabere na njedebe ikpeazụ ị chọrọ.
Iji jiri ọrụ a, ịkwesịrị ịbanye na taabụ "Data". Mgbe ahụ, ịkwesịrị ịpị "Analysis" ma ọ bụrụ na "bọtịnụ, nke dị na" igbe ọrụ data. "Mgbe ahụ, họrọ" Nhọrọ oge "... ihe dị na ndepụta ahụ.
A na-agbaji windo nhọrọ oke. N'ọhịa "Wụnye na cell" ị ga-ezipụta njikọ na cell nke nwere usoro achọrọ. Na ubi "Uru" ga-akọwapụta ihe ikpeazụ ị ga - achọ inweta. Na "Usoro agbanwe agbanwe cell" ubi ịkwesịrị ịkọwapụta ihe nhazi nke cell ahụ na uru a gbaziri.
Ihe Ọmụmụ: Ịme Nhọrọ Nhọrọ na Microsoft Excel
Ikike ndị ọrụ INDEX na-enye dị nnọọ nso na ike nke ọrụ CDF. Ọ na-enye gị ohere ịchọta data na ọtụtụ ụkpụrụ, ma weghachite ha na cell ahụ akọwapụtara.
Nchịkọta nke ọrụ a bụ: "INDEX (nọmba cell, akara nọmba; nọmba kọlụm)."
Nke a abụghị ndepụta zuru oke nke ọrụ niile dị na Microsoft Excel. Anyị kwụsịrị ilebara naanị anya na ndị kachasị ewu ewu, nke kachasị mkpa.
Gbanwee asụsụ interface na MS Okwu
UltraISO: Ngwa Disk Ọkụ na Draịvụ USB
NoScript: Nchebe ọzọ na Mozilla Firefox nchọgharị
Ntaneti vidiyo na-egosi na Facebook ozi
Esi gbanyụọ Secure Boot
Mgbe ụfọdụ, enwere ike ịnwe nsogbu na nkwarụ "Ọnọdụ Nchekwa" Windows. Isiokwu a ga-enye nduzi banyere otu esi esi pụọ na ụdị mbipụta a nke ịmepụta sistemụ arụmọrụ na kọmputa na Windows 10 na 7. Ịkwụsị "Nchekwa Nchekwa" weghachite okwuntughe na ya. GụKwuo
Advanced Grapher 2.2
Ịwụnye mmemme ndị ọbịa na VirtualBox
https://termotools.com ig.termotools.com © Oke ego 2019